Midowga Yurub Oo Sheegay In Isbeddel Ballaadhan Laga Sameeyey Waxbarashada Somaliland – somalilandtoday.com
Midowga Yurub Oo Sheegay In Isbeddel Ballaadhan Laga Sameeyey Waxbarashada Somaliland
Warbixin Midowga Yurub Soo Saaray Oo Ammaantay Tallaabooyin Ay Wasaaradda Waxbarashaddu Qaadday
Xukuumadda Somaliland ayaa Balanqaaday Inay Kordhiso Xaddiga Miisaaniyadda Ee Dhinaca Waxbaraashada Oo La Gaadhsiinayo 13% Sannadka 2021ka.
(SLT-Hargeysa)-Midowga Yurub ayaa daboolka ka qaaday in isbeddel laga sameeyey waxbarashadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay kordheen wiilasha iyo hablaha dugsiyada la qoraa.
Siday Werisay Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA oo soo xiganaysa warbixin shalay ay soo saareen Midowga Yurub oo lagu sheegay in Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland, Midowga Yurub iyo Hay’adda Global Partnership For Education, ay 17kii iyo 18kii bishan wadajir u qabteen Hargeysa shir ay dib u eegis ku sameynayeen qorshaha waxbarashadda ee dalka. Warbixinta Midowga Yurub waxa lagu caddeeyey in shirkaas lagu qiimeeyey hadafkii la hiigsanayey, waxa kaloo lagu dejiyey qorshe hawleedka tacliimeed ee sannadka 2019ka, kaasi oo waafaqsan barnaamijka waxbarasho 2017ka illaa 2021ka.
Midowga Yurub waxay intaas ku dareen in himilooyinka waxbarashadda Somaliland ee sannadka 2019ka ay ka mid yihiin in kor loo qaado ka qaybgalka waxbarashadda ee wiilasha iyo hablaha, in la horumariyo tayada waxbarashadda, tababarka macalimiinta iyo in la xoojiyo maamulka waxbarashadda waddanka. Waxa kaloo warmurtiyeedka lagu xaqiijiyey in xukuumadda Somaliland balanqaaday inay kordhiso xaddiga miisaaniyadda ee dhinaca waxbaraashada oo la gaadhsiinayo 13% sannadka 2021ka.